Zhou Fan Zhi
Zhou Fan Zhi China (fududaynaya Shiinaha: 蕃蕃 志; 蕃志 志; 蕃蕃 志; Pinyin: Zhu Fān Zhì; Wade-Giles: Chu-fan-chi) ama jumlado kale oo la mid ah, waa fanaankii 13aad ee gabayga Song Zhao Rugua. Shaqadu waxay ka kooban tahay sharraxaadyo dalal iyo alaabooyin kala duwan oo ka kala yimid dibadda Shiinaha, waxaana loo tixgeliyaa il muhiim ah oo ku saabsan dadka, caadooyinka iyo gaar ahaan badeecadaha ganacsiga ee dalal badan oo ku yaal Koonfurta Bari Asiya iyo agagaarka Badweynta Hindiya inta lagu jiro Song Dynasty. Tarjumaad Ingiriisi ah oo la qaybiyay ayaa la daabacay 1911 Friedrich Hirth iyo William W. Rockhill.
Qoraaga Zhao Rugua (1170-1231) wuxuu ka tirsanaa qabiilka Imperial ee boqortooyada Imperial. Waxa loo diray Fujian oo ah kormeere ganacsigii badda ee Quanzhou.   Intii uu ka shaqeynayay Fujian, wuxuu fursad u helay inuu la kulmo ganacsatada dalal kala duwan oo laga soo ururiyey macluumaad ku saabsan dalalka kala duwan ee adduunka. Waxa kale oo uu qaatay qoraallada alaabooyinka kala duwan, oo wax ka bartay khariidada xilligaas, oo ay la socdaan macluumaadka uu bartay uu qoray buug uu qoray dhammadii 1225 CE. Zhao waxa uu qoray: "Waxaan ku dhajiyay post this dhawaan, waxaan ku qaataa maalintii oo dhan akhrisyo khariidado kala duwan ... Waxaan magacyo ka mid ah dalalkaas iyo caadooyinkooda ... Waxaan maqalay maqal iyo xaqiiqda aan haysto, sidaas darteed waxaan magacayga ku magacaabaa Zhu Fan Zhi." [ 9] Qeybo badan oo ka mid ah Juuf Fan Zhi waxay ka helayaan macluumaad ka yimid shaqooyinka kale ee waawayn, sida Zhu Yu's Pingzhou Ketan oo ka yimid 1116,  Duan Chengshi ee qarnigii 9aad ee kala duwanaa Youyang, iyo shaqooyin kale  Gaar ahaan waxaa si xoog leh looga soo qaatay 1178 shaqo Lingwai Daida oo uu geesto Juqul kale, Zhou Qufei (Shiineys: Jariidadda: Zhōu Qùfēi; Wade-Giles: Chou Ch'u-fei). Si kastaba ha ahaatee, qayb muhiim ah oo ka mid ah buugga ayaa ka yimid macluumaadka Zhao ka soo iibsaday ganacsato shisheeye iyo Shiinaha.  Sidii isaga qudhiisu aanu u safrin dibada, macluumaadka uu soo ururiyey waa lagama maarmaanka u ah, sida ka duwan shaqooyinka kale sida Daoyi Zhilue oo uu qoray Wang Dayuan oo ka tirsanaa Yuan Dynasty kuwaas oo u safray dibada si ay u ilaaliyaan wadamada kale marka hore. Si kastaba ha ahaatee, buugga waxaa ku jira macluumaad qiimo leh oo ku saabsan waddamo kala duwan oo ka ganacsan jiray waxyaabaha qarnigii 13aad ee culimada casriga ah.  Buugga asalka ah ayaa lumay, lakin waxa lagu soo koobay qoraallo kale iyo waliba waxyaalaheeda, sidoo kale waxa ku jira mawduuca 15aad ee Yongle Encyclopedia. Waxaa markaas kadib laga soo saaray ansixinta 'Yongle Encyclopedia' by Li Diaoyuan (李 調 元) waxaana loo soo celiyay si loogu soo daro ururkiisa oo loo yaqaan Han Hai (Jamaaca) 1781. 
Mugga 1, 58 dal iyo gobollo ayaa la siiyaa.  Wadamada iyo boqortooyooyinka waxaa ka mid ah goobaha iyo boqortooyooyinka South East Asia, sida Jiaozhi (交趾, waqooyiga Vietnam), Champa (占城), Zhenla (眞 臘, Cambodia), Langkasuka (凌 牙 斯加), Sanfoqi (三 佛 齊, Srivijaya,  Java (闍), Bagan (ummaan, Burma), iyo Mayi (麻 逸, Mindoro, Filibiin).  Japan, Korea iyo Taiwan oo ku yaala Bariga Aasiya, iyo waddamada ku yaal Hindiya sida Huchala (Nuspi), Nanpi (南 毗, Malabar) iyo Zhunian (注 輦, Chola). Waxay sidoo kale bixisaa macluumaad badan ka hor intaan laga helin ilaha Shiinaha ee dunida Islaamka iyo alaabadooda. Dalka Dash ee (Carabtu, Carabta) ayaa lagu qeexay inay tahay dhul ballaadhan oo daboolaya dhulal badan (24 lagu bixiyey buugga) caasimaddiisa Masar, waxaana ku jiray Baida (白 达, Baghdad); Wengman (甕 蠻 Oman); Majia (麻 嘉, Mecca); Jilani (吉 慈 尼, Ghazni) iyo kuwo kale.  Buuggu wuxuu sii dheeraaday wadamada iyo goobaha Afrika, kuwaas oo ay ka mid yihiin Wusili (Masar, Masar) iyo magaala Egentuo (Baasuuke, Alexandria), Bipaluo (Berbera, Berbera), Zhongli (中 理, Somalia) Cengba (層 拔, Zanzibar), Binouye (Tunisia iyo gobolka Tripoli ee Liibiya), iyo Tuobandi (Damietta ee Masar).  Buuggan dhexdiisa, wuxuu ku sharaxay meelaha sida Faarfoorka Aasiya ee Alexandria:   Dalka O-kön-t'o (Alexandria) ayaa iska leh Wu-ssï-li (Masar). Sida caadada u ah dhaqanka, waagii hore, shakhsi ahaan, Tsu-ko-ni (Alexander the Great) magaciisa oo ku dhisay xeebta weyn ee dhererkeedu yahay dhulka dhulka la qoday iyo labo qol ayaa la sameeyey, si fiican u xiran aad u qarsoodi. Mid ka mid ah musqul wuxuu ahaa hadhuudh, midka kalena wuxuu ahaa hub. Oo munaaraduna waxay ahayd laba boqol oo kun oo buun. Afar faras oo farabadan ayaa kor u kici kara saddex-meelood laba meelood. Dhismaha dhismaha wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan oo la xidhiidha webiga weyn ... Shirarka waxaa ku jiray muraayad weyn oo cajiib ah; haddii maraakiib dagaal oo wadamo kale ay weerar ku qaadeen, muraayada ayaa horay u soo ogaaday, askartuna waxay diyaar u yihiin waqtigii loogu talagalay. - Zhao Rugua, tarjumo by Hirth iyo Rockhill  Gobolka galbeedka ee lagu sharraxay waa Mulanpi, oo ku jirta koonfurta Spain.  Jasiiradda Mediterranean ee Sicily (斯加里 野, Sijialiye) ayaa sidoo kale lagu sheegay. 
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Zhu_Fan_Zhi&oldid=209264"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 6 Febraayo 2021, marka ee eheed 11:34.